Ningbo SUNPLAST Sodina Co., Ltd dia mifantoka amin'ny orinasa mpamokatra entana, ny HDPE TAPAKA FANTSONA rafitra ho an'ny mihoatra ny 15 taona. Nanomboka ny raharaham-barotra toy ny bitika kely orinasa izay nanana 5 mpiasa & ihany extrusion iray andalana ho an'ny 20-315mm HDPE sodina, fa ankehitriny, dia efa nitombo ho maoderina fividianana orinasa iraisam-pirenena roa orinasa mpamokatra entana atrikasa & mihoatra ny 100 ny mpiasa.
Ankehitriny, SUNPLAST no iray amin'ireo mpitarika mpanamboatra & Mpanome ny HDPE TAPAKA FANTSONA rafitra ao Shina. Mandritra izany fotoana izany, ny orinasa fivarotana manana birao manerana ny Shina sy ny sodina HDPE vokatra no aondrana any amin'ny firenena mihoatra ny 20 sy faritra eran-tany.
Amim-pitiavana isika handray ny mpanjifa avy any ivelany mba hanontany antsika, fa ataovy ny "handresy-fandresena" fifandraisana raharaham-barotra miaraka.